WUFUUDDA SHIRKA ELDORET OO MAANTA CUNTADII LOO DIYAARIYEY
Wufuudda shirka dibu heshiisiinta soomaalida ka qayb gelaysa oo ilaa shalay aan wax cunto ah ka helin hoteelada ay deggan yihiin ayaa maanta dib loogu bilaabay in sidii caadiga ahyd cunto maalmeedkoodii loogu diyaariyo.
Arinta ah in cuntada la joojiyo ayaa ka dhalatay dadka iska leh hoteelada ay soomaalidu degan tahay oo ka mudaharaadayey inaan la siin lacagtii ay wufuudda ku qarash gareeyeen labadii todobaad ee ugu dambeeyey.
Xubnaha Kenya ugu jira Gudiga farsamada Igad ee shirka oo maanta ka hadlay arintan ayaa muujiyey inay xaajadani ceeb iyo fool xumo ku tahay wadanka martida loo yahay ee Kenya.
Midowga Yurub oo ah hay'adda bixisa qarashaka shirka ku baxa ayaa iyaguna sheegay inay lacag shirka u hayaan laakiin ay arintu ku timid farsama xumo dib u dhac ku keentay isku xidhnaanta gudiga farsamada iyo mulkiilayaasha hoteelada.
Soomaalida Eldoret ku sugan ayaa wel wel ka muujisay sida ay uga xun yihiin dhibaatada cunto la’aaneed ee ergooyinka ku timid. Galabta ayeey wufuuddu ka afurayaan meelaha ay degan yihiin kaddib markii mulkiilayaasha hoteelada maanta la soo gaarsiiyey lacagtii ka maqnayd.
[Maalin kasta waxaa shirka kubaxa $60,000 ... Eeg warbixintii hore...]